ल्यान्डिङ विवाद - परिहास - नेपाल
- सुरेश किरण
कल्पना गर्नोस्, तपाईं कुनै ठूलो जेट विमानमा बसेर लामो दूरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ । जेट विमानको यात्रा आरामदायी हुनु स्वाभाविकै हो । यात्रा मजाले अघि बढिरहेको थियो । यसै बीच अचानक कसैले तपाईंलाई खबर गर्‍यो कि कक्पिटमा बसेर विमान उडाइरहेका दुई पाइलटबीच कुनै कुरालाई लिएर झगडा सुरु भयो । अब तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
जेट विमान भनेको कुनै ट्याक्सी वा टेम्पो होइन, जो चालकलाई मन लागेको ठाउँमा लान सकियोस् । जेटमा त पाइलटै दुइटा हुन्छन् । दुई जनाको समन्वयले विमानलाई उडाउने, कुदाउने र झार्ने हो । तर विमान उडाइरहेका पाइलटबीच नै झैँझगडा पर्‍यो भने के गर्ने ?
हुन त आजसम्म उडिरहेको कुनै पनि विमानभित्र यस्तो समस्या आइपर्‍यो भनेको खबर हामीले सुनेका छैनौँ । तर नेपाल विश्वकै एक मात्र त्यस्तो देश हो, जहाँ दुनियाँमा कहीँ नभएका र नहुने घटना मात्रै हुने गर्छन् । उडिरहेको जेटभित्र पाइलट–पाइलट झगडा परेको घटना पनि नेपालमै भएको हो ।
एनसीसी–टु थर्ड कल साइन भएको यो विमान आकाशमा उड्दा उड्दै दिशाहीन बन्न पुगेको जानकारी आएको छ । कारण हो, ककपिटमा बसिरहेका दुई पाइलटबीचको झगडा । विमान उडिसकेपछि अब यसलाई कुन दिशातिर लाने भन्नेबारे पाइलटहरूबीच झगडा पर्‍यो रे भन्ने खबर आएको छ । विमान आकाशमा पुगिसकेपछि पाइलटहरू जेटम्याप झिकेर विवाद गर्दै छन् । वास्तवमा विमान ल्यान्ड गर्ने एयरपोर्टचाहिँ कुन हो ? एउटाले एउटा एअरपोर्ट देखाइरहेको छ, अर्कोले अर्कै एअरपोर्ट देखाइरहेको छ । विमान ल्यान्ड गर्ने एअरपोर्टै फरक भएपछि उड्ने बाटो पनि फरक हुने भइहाल्यो । पाइलटहरूले कुनै निर्णय दिन नसकेकोले विमान यतिखेर आकाशमै उडेर फन्कोमाथि फन्को मारिरहेको छ । यसरी बिनाकाम आकाशमै विमान उडाइरहृयो भने अचानक दुर्घटनै हुन पनि के बेर ! पाइलट महोदयहरूले केही सोचेका छन् ?
प्रकाशित: असार १७, २०७६